« Antsam-piderana ho an’ny firenena »: seho ara-pilazantsara goavana, hametrahana fitoniana… | NewsMada
« Antsam-piderana ho an’ny firenena »: seho ara-pilazantsara goavana, hametrahana fitoniana…
« Aza mety ho resin’ny ratsy ianao fa reseo amin’ny soa ny ratsy”, Romana 12:21. Miainga avy amin’izay andalan-tenin’ny Soratra masina izay ny tondrozotran’ny hetsika “Antsam-piderana ho an’ny firenena”. Haka endrika fampisehoana ara-pilazantsara goavambe izany, hotontosaina ny asabotsy 6 marsa izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.
Tarika sy antoko mpihira maherin’ny 20 ny hifandimby hiaka-tsehatra, hanafana io fotoana io. Anisan’ireny ry Antsa an’i Kristy, i Jaw’s Band, ny Tana Gospel Choir, ny PP Shine, i Ndriana Ramamonjy, ny tarika Ny Ainga, ny Tanora Masina Itaosy, ny TDL, ny tarika Ny Avo, i Vero Ranaivoson, ny Karmela, i Njara Marcel, i Firmin, i Mialy Rakotomamonjy, ny Vetsonkira, i Laurent Rakotomamonjy, ny Reko Fy & His Band, sns. Hanelanelana ny fotoana ny fiaraha-mivavaka ho an’ny firenena, araka ny lohahevitra.
“Hamaliana soa ny ratsy, indrindra manoloana ny zava-miseho nolalovan’ny firenena, vokatr’ireny aretina Covid-19 ireny ny hetsika. Eo koa ireo savorovoro samihafa amin’izao fotoana izao, izay tena ilaina fitoniana. Hametrahana fitoniana ho an’ny olona tsirairay avy no tanjona ka amin’ny alalan’ny vavaka ny ahafahana manao izany”, hoy ny fanazavana nomen-dRakotovao Stephanie, iray amin’ireo mpikarakara.
Araka ny toromarika avy amin’ny mpikarakara hatrany, entanina ireo rehetra hanatrika ny fotoana mba hiakanjo fotsy. “Ho mariky ny fahadiovam-po, ny firaisankina ary ny fihavanana ny antony”, hoy hatrany ny fanazavana. Efa nisy ny fakana ny tapakila mialoha, ary filaharambe no tazana teny amin’ny Super Music Analakely, roa andro izay. Ankoatra ny ao anatin’ny lapa, hisy ny fandefasana ny seho amin’ny alalan’ny “écrans géants” eny ivelany. Fantatra fa ezahina koa ny hisian’ny fandefasana mivantana amina toerana malalaka hafa, toy ny eny Analakely sy eny Anosy, mba tena hahakasika olona betsaka ny hetsika.